सारिका घिमिरेलाई कसले लगायो ‘मोहनी’....(भिडियो सहित) – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainmentसारिका घिमिरेलाई कसले लगायो ‘मोहनी’….(भिडियो सहित)
काठमाडौँ. मोडलिङ तथा अभिनय क्षेत्रमा चर्चित नाम सारिका घिमिरेले बुधबार आफ्नो पहिलो एकल गीति एल्बम ‘मोहनी’ सार्वजनिक गरेकी छिन । राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गराउदै उनले सो एल्बम सार्वजनिक गरेकी हुन्।
कार्यक्रममा सारिकालाई शुभकामना दिन बरिष्ठ संगीतकार शम्भुजित बास्कोटा, गायिका संगीता राना प्रधान, अभिनेत्री झरना थापा जस्ता कलाकारहरुको गौरवमय उपस्थिति रहेको थियो। एल्बमसँगै सारिकाले सोहि एल्बममा समावेश गीत ‘के देखेर माया लायौ’ बोलको भिडियो पनि सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
सार्वजनिक एल्बममा जम्मा ४ वटा गीतहरु समावेश छन । रमेश थापाको शब्द तथा जितेन लेप्चाको संगीतमा सारिकाले मिठो स्वर दिएको गीतमा उनि आफै र पुष्पल खड्का फिचरिङ छन् ।
सुब्रत राज आचार्यको निर्देशनमा बनेको गीतलाई अर्जुन तिवारीको समूहले खिचेका हुन् । गम्बिर बिष्टको करियोग्राफी रहेको गीतलाई भरत रेग्मीले सम्पादन गरेका हुन् ।